Ny fotoana mahaliana amin'ny marketing miaraka amin'i IoT | Martech Zone
Ny fotoana mahaliana amin'ny Marketing miaraka amin'i IoT
Asabotsy, Aprily 7, 2018 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Herinandro na lasa izay dia nangatahana aho mba hiteny amin'ny hetsika isam-paritra ny Internet-javatra. Amin'ny maha mpiara-miasa ny Podcast Dell Luminaries, Nahazo fampandrenesana taonina tamin'ny informatika Edge aho sy ny fanavaozana ny teknolojia izay efa manomboka. Na izany aza, raha mitady ianao varotra Mikasika ny IoT, marina fa tsy be ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Internet. Raha ny marina dia diso fanantenana aho satria hanova ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa i IoT.
Fa maninona no IoT Transformative?
Misy fanavaozana maro izay tonga amin'ny tena izy izay hanova IoT:
5G Wireless dia ahafahan'ny hafainganam-pandehan'ny bandwidth esory ny fifandraisana misy tariby ao anatin'ny trano sy orinasa. Nahavita hafainganam-pandeha mihoatra ny 1 ny fitsapanaGbit / s hatramin'ny halavirana hatramin'ny 2 kilometatra.
Miniaturization ny singa computing miaraka amin'ny herin'ny kaonty mitombo dia hahatonga ny fitaovana IoT ho manan-tsaina tsy mila famatsiana herinaratra be loatra. Ny solosaina kely kokoa noho ny denaria dia afaka mihazakazaka maharitra miaraka amin'ny herin'ny masoandro sy / na famahanana tsy misy tariby.
Security ny fandrosoana dia ampidirina ao anaty fitaovana fa tsy avela ho an'ny mpanjifa sy ny orinasa hahafantatra ny tenany.
The vidin'ny IoT ny fitaovana dia mahatonga azy ireo ho lafo. Ary ny fandrosoana amin'ny circuitry vita pirinty dia ahafahan'ny orinasa mamolavola sy manamboatra ny singa IoT azy manokana - ahafahan'ny fampiasana azy ireo na aiza na aiza. Na dia ny fampisehoana OLED azo ovaina vita pirinty aza dia eo akaiky eo ihany - manome ny fitaovana hanehoana hafatra na aiza na aiza.
Ka Ahoana no Hanao vokany eo amin'ny Marketing ity?
Eritrereto ny fomba nahitan'ny mpanjifa sy fikarohana ny vokatra sy serivisy nomen'ny orinasa tao anatin'ny zato taona lasa.
The Market - Taonjato iray lasa izay, ny mpanjifa dia tsy nahalala afa-tsy vokatra na serivisy iray mivantana tamin'ny olona na orinasa mivarotra azy. Ny marketing (araka izany anarana izany) dia ny fahafahan'izy ireo mivarotra ao amin'ny tsena.
Haino aman-jery nozaraina - Rehefa nanjary nisy ny haino aman-jery, toy ny fanontam-pirinty, ny orinasa dia nanararaotra nanao dokambarotra mihoatra ny feon'izy ireo manokana - ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo sy ny sisa.
Mass Media - Nipoitra ny haino aman-jery faobe, ankehitriny manome ny orinasa manana fahaizana mahatratra olona an'arivony na an-tapitrisany mihitsy aza. Mail mivantana, fahitalavitra, radio… na iza na iza tompon'ny mpijery dia afaka mandoa vola be hanatratra izany mpihaino izany. Ofisialy izy io, nitombo avo sy tombony lehibe ny indostrian'ny dokam-barotra. Raha te-hiroborobo ny orinasa dia tsy maintsy miasa amin'ny vavahady fidiram-bolan'ny mpanao dokambarotra izy ireo.
Digital Media - Ny Internet sy ny haino aman-jery sosialy dia nanolotra fotoana vaovao izay voadidy amin'ny media mahazatra. Afaka miasa amin'ny varotra am-bava izao ny orinasa amin'ny alàlan'ny fikarohana sy fantsona sosialy hananganana fahatsiarovan-tena sy hifandray amin'ireo mpihaino kendrena. Mazava ho azy, Google sy Facebook dia nanararaotra nanangana vavahady fidiram-bola manaraka teo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa.
Ny vanim-potoana vaovao amin'ny marketing: IoT
Ny vanim-potoana vaovao amin'ny marketing dia eo amintsika izay mahaliana kokoa noho ny zavatra rehetra hitantsika teo aloha. IoT dia hanome fotoana mahatalanjona mbola tsy hitantsika teo aloha - ny fahafahan'ny orinasa manitsakitsaka ny vavahady rehetra ary mifampiresaka, miaraka amin'ny vina sy mpanjifa hatrany.
Ao anatin'ny famelabelarana, namana tsara ary IoT manam-pahaizana John McDonald nanome fahitana tsy mampino momba ny hoavintsika akaiky. Nofaritany ny fiara ankehitriny sy ny fahefan'ny informatika tsy mampino ananany. Raha azo atao, ny fiara dia afaka mifandray ankehitriny amin'ny tompony, mampahafantatra azy ireo fa manenona sy reraka izy ireo. Afaka milaza aminao ny fiara fa hivoaka ny lalana manaraka ary atoroy ny Starbucks akaiky anao indrindra… na dia alao ny zava-pisotro tianao indrindra aza.
Andao handeha lavitra kokoa. Ahoana raha toa ka, i Starbucks dia nanolotra mug komuter amin'ny teknolojia IoT izay nifandray mivantana tamin'ny fiaranao, ny toerany manerantany, ny sensor, ary ny mug commuter dia nampahafantatra anao fa notandremana ny fisotroanao ary hisintona amin'ny fivoahana manaraka. Ankehitriny, ny Starbucks dia tsy miankina amin'ny vavahady handoavana sy hifandraisana amin'ny mpanjifa, afaka mifandray mivantana amin'ny mpanjifa izy ireo.
Io Io dia ho aiza na aiza, amin'ny zavatra rehetra
Hitanay sahady hoe aiza no misy orinasa fiantohana manome fihenam-bidy raha toa ka mametraka fitaovana ao anaty fiara ianao izay mampita ny lamina mitondra fiara amin'ny orinasa. Andao handinika fotoana bebe kokoa:
Ny fitaovanao fiantohana fiara dia mampita torolàlana mahomby kokoa amin'ny fitaterana mifototra amin'ny fahazarana mitondra fiara, ny toerana hisorohana ny loza, na ny làlambe mba hiarovana anao.
Ny boaty Amazonanao dia misy fitaovana IoT izay mifandray aminao mivantana mba hampisehoana aminao ny toerana misy azy ireo hahafahanao mihaona amin'izy ireo.
Ny orinasam-panompoanao ao an-toerana dia mametraka fitaovana IoT ao an-tranonao nefa tsy andoavanao vola izay mahatsikaritra ny tafio-drivotra, ny hamandoana, na ny bibikely mihitsy aza - manome anao tolotra hahazo asa fanompoana eo noho eo. Angamba izy ireo aza manome anao tolotra hanondro ireo mpiara-monina aminao.
Ny sekolin-janakao dia manome anao IoT fidirana any an-dakilasy hijerena ny fitondran-tenan'ny zanakao, ny fanamby na ny loka ananany. Mety afaka mifandray amin'izy ireo mihitsy aza ianao raha misy olana maika.
Ny mpiasan'ny trano sy trano dia mandroritra ny fitaovana IoT eraky ny tranonao mba hanomezana fitsangatsanganana virtoaly sy lavitra, afaka mihaona, miarahaba ary mamaly fanontaniana amin'ireo mpividy mety amin'ny fotoana rehetra na andro na alina rehefa mety amin'ny roa tonta. Ireo fitaovana ireo dia tsy mandeha ho azy rehefa ao an-trano ianao ary manome alalana amin'ny fandaharam-potoananao.
Ny mpitsabo anao dia manome anao sensor na anatiny na ivelany izay anaovanao na handevonanao izay manome tahirin-kevitra miverina amin'ny dokotera. Io dia ahafahanao misoroka ny hopitaly tanteraka, izay atahorana ho voan'ny aretina na aretina.
Ny toeram-pambolanao eo an-toerana dia manome fitaovana IoT izay mampifandray ny olana amin'ny fiarovana ny sakafo na manatitra hena, legioma ary mamokatra amin'ny fotoana mahomby miaraka aminao. Ny tantsaha dia afaka manatsara ny làlana maminavina ny fanjifana nefa tsy mila mivarotra any amin'ny Megastores amin'ny fivarotana amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Miroborobo ny tantsaha ary ny olombelona mamonjy amin'ny fanjifana solika tsy ilaina ny fizarana sy fizarana betsaka.
Ny tsara indrindra, ny mpanjifa dia hifehezana ny angon-drakitra misy antsika sy ireo afaka miditra ao aminy, ny fomba hahafahany miditra ao aminy, ary rehefa afaka miditra ao izy ireo. Ireo mpanjifa dia hanao varotra am-pifaliana ireo data rehefa fantatr'izy ireo fa manome tahiry azy ireo ny angon-drakitra ary noraisina am-pitantanana izany. Miaraka amin'ny IoT, ny orinasa dia afaka manorina fifandraisana matoky amin'ny mpanjifa izay ahafantaran'izy ireo fa tsy hamidy ny angon-drakitra. Ary ny rafitra ihany no hiantoka ny angon-drakitra voatahiry ho azo antoka sy azo antoka. Ny mpanjifa dia hitaky ny fifanatonana sy ny fanarahan-dalàna.
Noho izany, ahoana ny momba ny orinasanao - ahoana no ahafahanao manova ny fifandraisanao amin'ny prospect sy ny mpanjifa raha manana fifandraisana mivantana ianao ary afaka mifandray amin'izy ireo mivantana? Aleo ianao manomboka mieritreritra an'io anio… na mety tsy ho afaka hifaninana ato ho ato ny orinasanao.
Tags: 5gvanim-potoanaiotserasera marketing